March 5, 2021 Xuseen 8
Puntlandtimes (Muqdisho)-Musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah xubnaha midowga musharixiinta mucaaradka ah ee Soomaaliya ayaa shaaciyay qodobadii ay hor dhigeen Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ee ka biyo diiday in uu fuliyo si loo aado.
Qodobada oo kala ahaa:
2- Si loogu kalsoon karo amaanka dalka iyo kan doorashooyinka in ciidanka laga saaro siyaasada, lana bedelo ama ugu yaraan shaqada laga joojiyo taliyayaasha ciidanka, kuwa cusubna laga saxiixo in ay siyaasada faraha kala baxaan.
Dhanka kalena, xildhibaan Mahad Salaad oo kamdi ah xubnaha sare ee mucaaradka ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaare Rooble uu yahay shaqsi aysan wax go’aan ah ka go’in isla markaana tallaabo kasta oo uu qaadayo ay khasab ku noqotay inuu telefan u diro Madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin taasi oo adkaysay in heshiis muhiim ah la gaaro.
Walee SOOMALIYA wey qasan tahay farmaajo xaare qaska uu wado isagey ku soo noqon. Markuu dagaalkii qawnaa ku qaadey Jubbaland ku muusan guuleysan waana waxa meesha dhigey uu hada ku FASHILMEY. Dhibka ugu weyn uu hada farmaajo xaare la dhutinayo waa dagaalkii foosha xumaa uu ku qaadey Jubbaland
Khalif. Xaarka iyo waxaad sheegaysaa waa maxay akhlaaq xumudaa. Adigu ma xaartid miyaa kkkk. Mudane medaxweyne Farmaajo cay iyo aflaaadu wax lagaga qaadimaayo EE calyadda ha iska dhamaynina cawaanyahay
Waxaa la yiri, marka aad aragto Dhurwaa ka gardaran Dhurwaa kale, mid ma u hiilisaa ayaa ku qabato!
Hadda, marka aan arko habdhaqanka aay qabyaalada qaawan iyo Mooryaanimadu ka muuqato ee Musharixiinta halka beel ah ee Hotel Jasiira ka qaaylinayo, Farmaajo u hiilli baa I qabsato!
Waxaa wax la la yaabo ah, Rooble waxaay u arkaan in uu yahay, Raysalwasaare sharci ah oo xaq u leh in uu la wareego awooda dalka. Halka aay Farmaajihii xilka u dhiibay u arkaan in uu yahay, Madaxweyne hore oo aay tahay in uu iyaga ula sinnaado awooda dalka!!!!
Runtu waxaay tahay, haddii uu Rooble sharciyad u haaysto in uu dalka maamulo, Farmaajihii isagu xilka u dhiibayna kagaba sii xaq leh! Waana ficilladan oo kale sababaha aaysan wax a ugu hirgaleyn Nimankan Kaarka Qabyaaladeed isticmaalaya oo aaysan xitaa Beesha caalamka buuqoodu wax a oga soo qaadeyn.
Sharciyan Farmaajo, Rooble iyo Baarlamaankuba waqtigoodii wuu wada dhacay, ninkii mid kamid ah fadli gooni ah sii is yiraahdana, wuxuu lamid noqonayaan Ri is nuugtay!
Waxaan ogaaday in aaysan diyaar u ahayn in aay dalka ka dhacdo Doorasho uu Farmaajo Tartame ka yahay, Maamullada Puntland, Jubaland iyo Musharixiinta Beelaha Hawiye!
Sababtaasna aay tahay sababta aay had iyo goor oga cago jiidayaan in aay Farmaajo ku dhiiri geliyaan qashada Doorashadu. Iyagoo is tisay in aay marka hore ku furaan buuq iyo qalalaase faro badan, si aay Beesha caalamka arrinta u soo faro geliso oo aay ugu dambeyn Farmaajo ugu qasabto, in uu meesha banneeyo. Maadaama uu ku fashilmay in uu dalka Doorasho ka qabto. Sidaana aay mamnuuc oga noqoto, in uu xitaa tartanka kaga qayb galo! Aa la tahay!kkkk
Beel Caalam ah ma kala jeclo, Farmaajo, Culusoow, Shariif Afgaduud iyo cid kale toona oo waay arkayaan sida Doorashada loo xagal daacinayo. Iyo in uu xitaa sharuudiisa ku darsaday, DENI oo Maamul Goboleed madax ka ah, in Taliyeyaasha Ciidamada Federaalka Xilka laga qaado!!!
Oo yaa Taliyeyaasha xilka ka qaadaya oo kuwa cusub magacaabaya, haddii aad ninka aad sameyn lahaaba aad tiri wax sharciyad ah ma haaysto oo Qalinkiisu waa la rafacay?!!!!!! Kkkk
Soomaalida waxaay tiri, Xujo ma falanto ee Xaajo ayaa falanta!!!
War isku kalsoonaada oo waxa codeeynaya waa Xildhibaan Meesha Musuq ku yimide, u diyaar garooba in aad ninkan kula tartantaan, kala iibsashadooda oo Doorashada isbaarada ka daaya, waa intoodba ka guuleeysataane!!!!! Kkk war nimanku fulaysanaa, ma Cigaal baa dhalay?! Kkk
madaxwayne farmaajo waxaa laka rabaa goaan qaadasho iyo inuu wadanka badbaadiyo daaka maanta sheeganaya musharaxiinta qaar kamid ah maamul gobalada waxay u shaqeeyaan shisheeye waana wax qofwalba oo waxgarad ogyahay.
abi axmed waa badbaadiyey wadankiisa qoomiyad dhan buu gacanta ku qabtay.
farmaajo mawuxuu qabanlayahay 10 qof waxaan leenahay madaxweyne iskadaa jileeca ee wadanka badbaadi waa inaad talaabo qaadaa dadkaan waa waxmagarato heshiis mayanaaniin
waxay marayaan maanta inay dhahaan taliyayaashada xilka ka qaad adiku iscasil adaana halkaa gaarsiiyey
Warkuwaan waa cawaan shaati qabiil gashan.caqli xumadooda fiiri waxa ay ku hadlaysan. Xataa caruurtu waxaa ma tidhaahdeen. Caqlixumadda waa isku mid iyag iyo Deni
Soomaalida waxaa fiican in si fiican loo fikaro oo ann qabill iyo dhadhamo qof loogu hiilin . Farmaajo wuu ku guul daraystay inuu doorasho ku qabto waqtigeeda
wax kasta oo ku yimaada isagaa meshaas is dhigay
Talo kafog qabill, diktator iyo dhadhamo raadis ayay soomali ubaahan tahay
ALOOW SOOMAALI UGARGAAR OO HOGAANKA UDHIIB NINKA UGU KHAYRKA BADAN
Aniga ciyaarta meeshaba ka socotaa waxa ay igu noqotey mulsalsal dabo dheeraadey oo qoraayadii ay meel dhexe ku meereysanayaan. Caajis iyo jactad ayaa idili raba.
Farmaajo weli caadadiisii ma bedelin. Dawladiisu kolkii horeba warqad ayuun duulin jirtey. Imika haduu buug dhan intuu jeexjeexo dabeysa raaciyo cid eegeysaa ma jirto. Tilifoon haduu qeylo ku shubtana, dhehehaa la fireysanayaa. Shibanidiisii ayuu Villadiisii la fadhiyaa.
Deni iyo Axmedna inkastooy kolkii hore sabab wanaagsan ku dhegenaayeen imika damacooda iyo dareenkooda la garan maayo. Iinyo ayay kaga dhegtey.
Rooble wuxuu lasoo fadhiisto anigu xalbaan wadaaye ii kaalaya oo ila hadla, kolkii loo tegey waakaas aan hal shuruud ah filing Karin illaa uu haada Farmaajo ka helo.
Musharixiintiina faro badnidoodii doqoniimo ayay ku darsadeen. Mudoharaadbaa loo diiday oo waxay hadaba la shiryimaadeen, Farmaajo faraha ha laabto.
Beeshii caalamkuna waxey noqdeen wax matareyaal. Farahana wey kula jiraan meesha, hadana wax natiijo ah ma keeni karaan.
Why It is only Farmaajo who is responsible for the failure of election delays. Who is refusing to come and rectify the agreements that was adapted in September 17 2020 and February 16 2021. Let us clarify he is not the only who has the final say of the election and he has to stay till new government is elected period. Those calling themselves opposition should call the people who are refusing to come and sign the agreements reached. Just stop the nonsense and get a grip and if you are serious try to work for the country and people.